၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်း အာကာသသိပ္ပံ
ဘီလျံနာသူဌေး ရစ်ချတ် ဘရဲန်ဆဲန်နဲ့အဖွဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့ ခရီးသည်တင် ဗာဂျင်ဒ ဒုံးပျံယာဉ်။
ကမ္ဘာ့လူသားတွေအနေနဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့်၊ အကာသသိပ္ပံဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုတွေအတော်များများရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘိုရင်း ဂျက်လေယာဉ်ကြီးကတဆင့် အာကာသဆီ ဒုံးပျံပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့တာကနေစလို့ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာ ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းအလယ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဥက္ကာပျံတွေကို ဝင်တိုက်ပြီးလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်မယ့် ဂြိုလ်တုတွေ လွှတ်တင်တာအပါအဝင်၊ စင်္ကြာဝဠာလေ့လာရေး မှန်ပြောင်းသစ် ပစ်လွှတ်မှုအဆုံး တနှစ်ပတ်လုံးမှာ လူသားတွေဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း လူသားတွေရဲ့ အကာသသိပ္ပံဆိုင်ရာအောင်မြင်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အေပီသတင်းဆောင်းပါးကို ကိုအောင်မြတ်သူ ပြောပြပေးမှာပါ။
ဗြိတိန်စွန့်ဦးထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး Richard Branson ရဲ့ Virgin Orbit ဒုံးယာဉ်ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဝေဟင်ကတဆင့် အကာသထဲကို ပစ်လွှတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့် နှစ်စမှာပဲ အကာသရေးရာကိစ္စတွေ ဆူဆူညံညံရှိခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လလောက်တုန်းကတော့ ဝေဟင်ကနေ အကာသ ဒုံးပစ်လွှတ်ဖို့ ကနဦးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ တောင် ကယ်လိုရိုင်းနားကမ်းရိုးတန်းကနေ ပျံတက်သွားတဲ့ ဘိုးရင်း 747 လေယာဉ်ကြီးရဲ့ အောက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပေ ၇၀ ရှည်တဲ့ Launcher One ဒုံးပျံဟာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီလို့ Virgin Orbit ကုမ္မဏီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လေလံပွဲတွေမှာလည်း အကာသပစ္စည်းတွေက နေရာယူလာပါတယ်။ ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက Christie လေလံကုမဏီရဲ့ နယူးယောက်လေလံပွဲတခုမှာ အကာသရတနာသိုက်ထဲက အကာသကျောက်လေလံပွဲတခုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေပေါ်က ကျောက်စတခုက ဒေါ်လာ ငါးသိန်းအထိ လေလံ ရောင်းဈေးရခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ အစောပိုင်းမှာပဲ အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့ ပထမဦးဆုံး အကာသဂြိုလ်တစင်းကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုက အင်္ဂါဂြိုလ်ပတ်လမ်းထဲကို ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ဒူဘိုင်း အခြေစိုက် မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းထဲက လူတွေ အတော်လေး ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာရပ်ဘာသာစကားနဲ့ မျှော်လင့်ချက်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ လူမဲ့ ဂြိုလ်တုဟာ ၇ လ အကြာ မိုင် ၃ သန်းနီးပါး အင်္ဂါဂြိုလ်ဆီကို ခရီးနှင်ပြီး ဂြိုလ်ပတ်လမ်းထဲကနေ အင်္ဂါဂြိုလ်လေထုရပ်ဝန်းရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းမှာပါ။
ဆက်တိုက်ဆိုသလို အဲဒီ ဖေဖော်ဝါရီထဲမှာပဲ နာဆာရဲ့ ဂြိုလ်ဆင်းယာဉ်ငယ် Perseverance Rover ဟာ အင်္ဂါဂြိုလ်ရဲ့ Jezero ချောက်ကမ်းပါးအနီးမှာ ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါစီးနင်းသလို ခံစားကြရမယ့် အင်္ဂါဂြိုလ်ဆင်းယာဉ်ရဲ့ ရင်သက်ရှုမောဖွယ် အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်း နာဆာက ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂြိုလ်ပေါ်ဆင်းသက်တာ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အသံဖမ်းစက်က အလုပ်လုပ်တာမို့ ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်က လေတိုက်သံ ကအစ ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“အနည်းဆုံးတော့ ဒီမိုက်ကရိုဖုန်းလေးက အင်္ဂါဂြိုလ်လေ့လာရေးနယ်ပယ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တာပါ။” လို့ အကာသ ရူပဗေဒပညာရှင်လည်းဖြစ် နဲ့ ဂြိုလ်သဘာဝဗေဒ သုတေသန အင်စတီကျု (IRAP) က ပညာရှင်လည်းဖြစ်သူ Baptiste Chide ကပြောပါတယ်။
မတ်လထဲမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Astroscale က အာကာသထဲက အပျက်အစီးတွေ ရှင်းလင်းရေးအတွက် အထူးယာဉ်ကို ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ခေါင်းပေါ်က တန်ချိန် ကိုးထောင်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ အာကာသ အမှိုက်ရှင်းလင်းရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော်တို့ဘာမှမလုပ်ရင် ပြသနာက ပိုပြီးဆိုးသွားလိမ့်မယ်” လို့ Astroscale UK ရဲ့ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးမှုး Harriet Brettle က ပြောပါတယ်။
ဧပြီလထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ စမ်းသပ်ရဟတ်ယာဉ်ငယ်ဟာ အင်္ဂါဂြိုလ်မျတ်နှာပြင်ပေါ်က ပါးလွှာတဲ့ လေထုထဲ ပျံတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာဆာရဲ့ Ingenuity စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဒေါ်မီမီအောင်ကတော့ အခုလိုပြောပါတယ်။
“ အခုတော့ လူသားတွေဟာ တခြားဂြိုလ်ပေါ်မှာ ရဟတ်ယာဉ်မောင်းနှင်လို့ရပြီလို့ ကျမတို့ပြောနိုင်ပါပြီ”
မေလထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ ဂြိုလ်တုတလုံးဟာ ဥက္ကာခဲတခုပေါ်ကနေ အဖိုးတန် နမူနာတွေကိုယူဆောင်ပြီး နှစ်နှစ်ခွဲကြာမယ့် ကမ္ဘာမြေဆီကို ပြန်မယ့်ခရီးစဉ်ကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နာဆာရဲ့ ဂြိုလ်ဆင်းယာဉ် Osiris-Rex ဟာ ဥက္ကာပျံ Bennu ပေါ်ကို အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ က ဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်က နမူနာတွေကို စုဆောင်းခဲ့တာပါ။
ဇွန်လထဲမှာတော့ ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့အနီးဆုံးလည်းဖြစ် အပူပြင်းဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ သောကြာဂြိုလ်ဆီကို စက်ရုပ်အကာသယာဉ်နှစ်စင်း ဆင်းသက်မယ်လို့ နာဆာ အမေရိကန်အကာသအေဂျင်စီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နာဆာရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသစ် Bill Nelson ကတော့ ဒီ ဂြိုလ်ဆင်း စက်ရုပ်သစ်ရဲ့ ခရီးစဉ်နှစ်ခုနဲ့ပက်သက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။
“ မီးတောက်မီးလျံကြီးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ သောကြာဂြိုလ်မျတ်နှာပြင်ပေါ်မှာ ခဲ သတ္တုတွေ ဘယ်လို အရည်ပျော်နေလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီခရီးစဉ်နှစ်ခုက ရည်ရွယ်ပါတယ်”
နာဆာဟာ အာကာသထဲ ပြည်ကြီးငါးတချို့ကိုလည်း အကောင်ဖောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုကနေ အာကာသထဲ ဒီလိုတိရစာန်နဲ့ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအနုဇီဝပိုးမွှားတွေအကြား ဘယ်လို အပြန်အလှန်သက်ရောက်သလဲဆိုတာကို လေ့လာနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဖလော်ရီဒါ တက္ကသိုလ်က Jamie Foster က အခုလိုပြောပါတယ်။
“ တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်တွေနဲ့အနုဇီဝပိုးမွှားတွေအကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု သဘောတရားကို ကျနော်တို့တကယ့်ကို ပြည်ပြည့်စုံစုံ တကယ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အာကာသလို နေရာမှာဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင်မှ ဆိုးသေးတယ်”
စက်တင်ဘာထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ Perseverance အင်္ဂါဂြိုလ်ဆင်းယာဉ်ငယ်ကနေ ပထမဦးဆုံး ကျောက်နမူနာကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာဆာရဲ့ သုတေသနဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း Scott Hubbard ကတော့ အခုလို ပြောပါတယ်။
“ ဂြိုလ်နီကြီးပေါ်က နမူနာတွေ ယူပြန်လာဖို့ဆိုတာက ကျနော်တို့နာဆာက နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက် လိုချင်တောင့်တနေခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတရပ်ပဲ”
အောက်တိုဘာထဲမှာတော့ Swiss သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ စင်္ကြာဝဠာထဲမှာ တကယ်အစစ်နီးပါး ခရီးလှည့်လည်သလိုမျိုး ခံစားမှုပေးတဲ့ software တမျိုးကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာကာသ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ဂြိုလ်တွေ၊ ကြယ်စင်စုတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းတွေကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ သက်တောင့်သက်သာပဲ သုံးဘက်မြင် ရှုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အစစ်နီးပါးလိုဖြစ်နေအောင် ကျနော်တို့ရဲ့ စင်္ကြာဝဠာကြီးရဲ့ နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတရပ်အဖြစ် ဒီအခန်းကို ပုံတူဖန်တီးထားတယ်လို့ EPFL ရဲ့ ဝါရင့် သိပံ့္ပ ပညာရှင် Yves Revaz က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလထဲမှာလည်း နာဆာရဲ့ ဂြိုလ်တု Lucy ကို ပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီး ဥက္ကာပျံ ၈ ခုကို ၁၂ နှစ် အကြာ စူးစမ်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုလ် စတင်ဖြစ်တည်ကတည်းကအတိုင်း တည်ရှိနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ ကြာသပတေးဂြိုလ်ရဲ့ ပတ်လမ်းတွေထဲက ထူးဆန်းတဲ့ ဥက္ကာခဲတွေကိုလည်း လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလထဲမှာပဲ မနှစ်က လဆီကနေ ကမ္ဘာပေါ်ကို ပြန်ယူလာတဲ့ ကျောက်ခဲတွေကတဆင့် လကမ္ဘာရဲ့ မီးတောင်အခြေအနေတွေကို အတွင်းကျကျ သိရှိလာရတယ်လို တရုတ်ပညာရှင်တွေက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနမူနာတွေကို ခွဲခြမ်းလေ့လာမှုကနေ လကမ္ဘာရဲ့ ဓါတုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အပူရဲ့ သက်ရောက်ပြောင်းလည်းပုံ အချက်အလက်သစ်တွေကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလထဲမှာတော့ ဥက္ကာပျံတခုကို ဝင်တိုက်ဖို့ နာဆာက ဂြိုလ်တုတလုံးလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကိုခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ဒီဥက္ကာပျံတွေကို အရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခြင်းအားဖြင့် လမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်မလားဆိုပြီး စမ်းသပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
DART လို့အတိုခေါက်နာမည်ပေးထားတဲ့ ဂြိုလ်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲရေးစမ်းသပ်မယ့် ဂြိုလ်တုကို SpaceX Falcon9ဒုံးပျံရဲ့ ထိပ်ဖူးကနေတဆင့် သယ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာသန်း ၃၃၀ ကုန်ကျတဲ့ ဒီစီမံကိန်းဟာ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Bruce Willis ရဲ့ "Armageddon." ရုပ်ရှင်ကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်စေပါတယ်။
ကြယ်တွေပေါက်ကွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့အာကာသ တွင်းနက်တွေကို မြင်ရမယ့် နာဆာရဲ့ X-ray မှန်ပြောင်းကိုတော့ အခု ဒီဇင်ဘာထဲမှာ လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု အသစ်တွေကနေ စင်္ကြာဝဠာကြီးအကြောင်းကို ပြောပြဦးမှာပါ။ Cambridge တက္ကသိုလ်ရဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ အင်စတီကျုက ပါမောက္ခ Andrew Fabian ကတော့ အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ဘယ်ကနေ ရောက်ရှိလာသလဲဆိုတာနဲ့ စင်္ကြာဝဠာကြီးအကြောင်း ကျနော်တို့တကယ်ပဲ စူးစမ်းလေ့လာနေကြပါတယ်။ ဒါတွေက သက်ရှိတွေအတွက်တင်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြယ်တွေဘယ်ကလာသလဲ၊ ကြယ်စင်စုတွေကရော၊ စသဖြင့် အရာအားလုံးကို လေ့လာနေတာပါ။”
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ Hubble မှန်ပြောင်းကြီးရဲ့နေရာမှာ အစားဆက်ခံဖို့အတွက် အခု ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာ James Webb လို့ခေါ်တဲ့ အာကာသ မှန်ပြောင်းကို လွှတ်တင်မယ်လို့မှန်းထားပါတယ်။ မှန်ပြောင်းကြီးကတော့ ဥရောပ ဂြိုလ်တုတွေလွှတ်တင်နေကျ ပြင်သစ်ပိုင် Guiana ရဲ့ Kourou ကို အောက်တိုဘာလထဲက ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမျိုးဆက်သစ်အကာသလေ့လာမှုဟာ ဘယ်အကာသယာဉ်တွေထက်မဆို အကာသကို ပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့နဲ့ အရင်ကာလအခြေအနေကို ပိုပြီး စူးစမ်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရည်မှန်းထားပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျး အကာသသိပ်ပံဆိုငျရာ
ကမ်ဘာ့လူသားတှအေနနေဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှငျး ရောဂါကပျဘေးကွီးကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပမေယျ့၊ အကာသသိပ်ပံဆိုငျရာ အောငျမွငျမှုတှအေတျောမြားမြားရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘိုရငျး ဂကျြလယောဉျကွီးကတဆငျ့ အာကာသဆီ ဒုံးပြံပဈလှတျနိုငျခဲ့တာကနစေလို့ အင်ျဂါဂွိုလျပျေါမှာ ရဟတျယာဉျပြံသနျးနိုငျခဲ့ခွငျးအလယျ၊ အန်တရာယျရှိတဲ့ ဥက်ကာပြံတှကေို ဝငျတိုကျပွီးလမျးကွောငျးလှဲပဈမယျ့ ဂွိုလျတုတှေ လှတျတငျတာအပါအဝငျ၊ စင်ျကွာဝဠာလလေ့ာရေး မှနျပွောငျးသဈ ပဈလှတျမှုအဆုံး တနှဈပတျလုံးမှာ လူသားတှဟော သိပ်ပံဆိုငျရာ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှငျး လူသားတှရေဲ့ အကာသသိပ်ပံဆိုငျရာအောငျမွငျတိုးတကျမှုဆိုငျရာ အပေီသတငျးဆောငျးပါးကို ကိုအောငျမွတျသူ ပွောပွပေးမှာပါ။
ဗွိတိနျစှနျ့ဦးထှငျစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျကွီး Richard Branson ရဲ့ Virgin Orbit ဒုံးယာဉျကို ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဝဟေငျကတဆငျ့ အကာသထဲကို ပဈလှတျလိုကျနိုငျတာကွောငျ့ နှဈစမှာပဲ အကာသရေးရာကိစ်စတှေ ဆူဆူညံညံရှိခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၈ လလောကျတုနျးကတော့ ဝဟေငျကနေ အကာသ ဒုံးပဈလှတျဖို့ ကနဦးကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ တောငျ ကယျလိုရိုငျးနားကမျးရိုးတနျးကနေ ပြံတကျသှားတဲ့ ဘိုးရငျး 747 လယောဉျကွီးရဲ့ အောကျမှာတပျဆငျထားတဲ့ ပေ ၇၀ ရှညျတဲ့ Launcher One ဒုံးပြံဟာ ကမ်ဘာပတျလမျးကွောငျးထဲကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီလို့ Virgin Orbitကုမ်မဏီကကွညောခဲ့ပါတယျ။
လလေံပှဲတှမှောလညျး အကာသပစ်စညျးတှကေ နရောယူလာပါတယျ။ ဒီနှဈဖဖေျောဝါရီလတုနျးက Christie လလေံကုမဏီရဲ့ နယူးယောကျလလေံပှဲတခုမှာ အကာသရတနာသိုကျထဲက အကာသကြောကျလလေံပှဲတခုလုပျပါတယျ။ အဲဒီမှာ လပေျေါက ကြောကျစတခုက ဒျေါလာ ငါးသိနျးအထိ လလေံ ရောငျးစြေးရခဲ့ပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီ အစောပိုငျးမှာပဲ အာရပျကမ်ဘာရဲ့ ပထမဦးဆုံး အကာသဂွိုလျတစငျးကို အာရပျစျောဘှားမြားပွညျထောငျစုက အင်ျဂါဂွိုလျပတျလမျးထဲကို ပဈလှတျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီအတှကျလညျး ဒူဘိုငျး အခွစေိုကျ မွပွေငျထိနျးခြုပျရေးစခနျးထဲက လူတှေ အတျောလေး ဂုဏျယူဝမျးမွောကျခဲ့ကွပါတယျ။ အာရပျဘာသာစကားနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလို့နာမညျပေးထားတဲ့ လူမဲ့ ဂွိုလျတုဟာ ၇ လ အကွာ မိုငျ ၃ သနျးနီးပါး အင်ျဂါဂွိုလျဆီကို ခရီးနှငျပွီး ဂွိုလျပတျလမျးထဲကနေ အင်ျဂါဂွိုလျလထေုရပျဝနျးရဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးမှာပါ။
ဆကျတိုကျဆိုသလို အဲဒီ ဖဖေျောဝါရီထဲမှာပဲ နာဆာရဲ့ ဂွိုလျဆငျးယာဉျငယျ Perseverance Rover ဟာ အင်ျဂါဂွိုလျရဲ့ Jezero ခြောကျကမျးပါးအနီးမှာ ဆငျးသကျခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ လိုကျပါစီးနငျးသလို ခံစားကွရမယျ့ အင်ျဂါဂွိုလျဆငျးယာဉျရဲ့ ရငျသကျရှုမောဖှယျ အရညျသှေးကောငျးတဲ့ ရုပျသံဗှီဒီယိုဖိုငျကိုလညျး နာဆာက ထုတျပွနျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဂွိုလျပျေါဆငျးသကျတာ မအောငျမမွငျဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး အသံဖမျးစကျက အလုပျလုပျတာမို့ ဂွိုလျမကျြနှာပွငျပျေါက လတေိုကျသံ ကအစ ဖမျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
“အနညျးဆုံးတော့ ဒီမိုကျကရိုဖုနျးလေးက အင်ျဂါဂွိုလျလလေ့ာရေးနယျပယျသဈကို ဖှငျ့လှဈပေးလိုကျတာပါ။” လို့ အကာသ ရူပဗဒေပညာရှငျလညျးဖွဈ နဲ့ ဂွိုလျသဘာဝဗဒေ သုတသေန အငျစတီကြု (IRAP) က ပညာရှငျလညျးဖွဈသူ Baptiste Chide ကပွောပါတယျ။
မတျလထဲမှာတော့ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ Astroscale က အာကာသထဲက အပကျြအစီးတှေ ရှငျးလငျးရေးအတှကျ အထူးယာဉျကို ပဈလှတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကနြျောတို့ခေါငျးပျေါက တနျခြိနျ ကိုးထောငျကြျောလောကျရှိတဲ့ အာကာသ အမှိုကျရှငျးလငျးရေးရဲ့ အစိတျအပိုငျးအရပျလညျးဖွဈပါတယျ။
“ဒါနဲ့ပကျသကျပွီး ကနြျောတို့ဘာမှမလုပျရငျ ပွသနာက ပိုပွီးဆိုးသှားလိမျ့မယျ” လို့ Astroscale UK ရဲ့ လုပျငနျးစဈဆေးရေးမှုး Harriet Brettle က ပွောပါတယျ။
ဧပွီလထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ စမျးသပျရဟတျယာဉျငယျဟာ အင်ျဂါဂွိုလျမတျြနှာပွငျပျေါက ပါးလှာတဲ့ လထေုထဲ ပြံတကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နာဆာရဲ့ Ingenuity စီမံကိနျးမနျနဂြော ဒျေါမီမီအောငျကတော့ အခုလိုပွောပါတယျ။
“ အခုတော့ လူသားတှဟော တခွားဂွိုလျပျေါမှာ ရဟတျယာဉျမောငျးနှငျလို့ရပွီလို့ ကမြတို့ပွောနိုငျပါပွီ”
မလေထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ ဂွိုလျတုတလုံးဟာ ဥက်ကာခဲတခုပျေါကနေ အဖိုးတနျ နမူနာတှကေိုယူဆောငျပွီး နှဈနှဈခှဲကွာမယျ့ ကမ်ဘာမွဆေီကို ပွနျမယျ့ခရီးစဉျကို စတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နာဆာရဲ့ ဂွိုလျဆငျးယာဉျ Osiris-Rex ဟာ ဥက်ကာပြံ Bennu ပျေါကို အောကျတိုဘာ ၂၀၂၀ က ဆငျးသကျခဲ့တာဖွဈပွီး ဂွိုလျမကျြနှာပွငျပျေါက နမူနာတှကေို စုဆောငျးခဲ့တာပါ။
ဇှနျလထဲမှာတော့ ကမ်ဘာဂွိုလျနဲ့အနီးဆုံးလညျးဖွဈ အပူပွငျးဆုံးလညျးဖွဈတဲ့ သောကွာဂွိုလျဆီကို စကျရုပျအကာသယာဉျနှဈစငျး ဆငျးသကျမယျလို့ နာဆာ အမရေိကနျအကာသအဂေငျြစီက ကွညောခဲ့ပါတယျ။ နာဆာရဲ့ အုပျခြုပျရေးမှူးသဈ Bill Nelson ကတော့ ဒီ ဂွိုလျဆငျး စကျရုပျသဈရဲ့ ခရီးစဉျနှဈခုနဲ့ပကျသကျပွီး အခုလိုပွောပါတယျ။
“ မီးတောကျမီးလြံကွီးတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ သောကွာဂွိုလျမတျြနှာပွငျပျေါမှာ ခဲ သတ်တုတှေ ဘယျလို အရညျပြျောနလေဲဆိုတာကို နားလညျနိုငျဖို့အတှကျ ဒီခရီးစဉျနှဈခုက ရညျရှယျပါတယျ”
နာဆာဟာ အာကာသထဲ ပွညျကွီးငါးတခြို့ကိုလညျး အကောငျဖောကျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီစမျးသပျမှုကနေ အာကာသထဲ ဒီလိုတိရစာနျနဲ့ မြိုးပှားမှုဆိုငျရာအနုဇီဝပိုးမှားတှအေကွား ဘယျလို အပွနျအလှနျသကျရောကျသလဲဆိုတာကို လလေ့ာနိုငျဖို့ဖွဈတယျလို့ ဖလျောရီဒါ တက်ကသိုလျက Jamie Foster က အခုလိုပွောပါတယျ။
“ တိရိစ်ဆာနျဆဲလျတှနေဲ့အနုဇီဝပိုးမှားတှအေကွား အပွနျအလှနျ ဆကျသှယျမှု သဘောတရားကို ကနြျောတို့တကယျ့ကို ပွညျပွညျ့စုံစုံ တကယျနားမလညျခဲ့ပါဘူး။ အာကာသလို နရောမှာဆိုရငျတော့ ပိုလို့တောငျမှ ဆိုးသေးတယျ”
စကျတငျဘာထဲမှာတော့ နာဆာရဲ့ Perseverance အင်ျဂါဂွိုလျဆငျးယာဉျငယျကနေ ပထမဦးဆုံး ကြောကျနမူနာကို စုဆောငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နာဆာရဲ့ သုတသေနဌာန ညှနျကွားရေးမှူးဟောငျး Scott Hubbard ကတော့ အခုလို ပွောပါတယျ။
“ ဂွိုလျနီကွီးပျေါက နမူနာတှေ ယူပွနျလာဖို့ဆိုတာက ကနြျောတို့နာဆာက နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောလောကျ လိုခငျြတောငျ့တနခေဲ့တဲ့ ခွလှေမျးတရပျပဲ”
အောကျတိုဘာထဲမှာတော့ Swiss သုတသေနပညာရှငျတှဟော စင်ျကွာဝဠာထဲမှာ တကယျအစဈနီးပါး ခရီးလှညျ့လညျသလိုမြိုး ခံစားမှုပေးတဲ့ software တမြိုးကို တီထှငျခဲ့ကွပါတယျ။ အာကာသ စိတျဝငျစားသူတှအေနနေဲ့ ဂွိုလျတှေ၊ ကွယျစငျစုတှေ၊ နိုငျငံတကာ အာကာသစခနျးတှကေို ကမ်ဘာမွပေျေါကနေ သကျတောငျ့သကျသာပဲ သုံးဘကျမွငျ ရှုစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျ့ကို အစဈနီးပါးလိုဖွဈနအေောငျ ကနြျောတို့ရဲ့ စင်ျကွာဝဠာကွီးရဲ့ နောကျထပျအစိတျအပိုငျးတရပျအဖွဈ ဒီအခနျးကို ပုံတူဖနျတီးထားတယျလို့ EPFL ရဲ့ ဝါရငျ့ သိပံ့်ပ ပညာရှငျ Yves Revaz က ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလထဲမှာလညျး နာဆာရဲ့ ဂွိုလျတု Lucy ကို ပဈလှတျခဲ့ပွီး ဥက်ကာပြံ ၈ ခုကို ၁၂ နှဈ အကွာ စူးစမျးလလေ့ာမှာဖွဈပါတယျ။ ဂွိုလျ စတငျဖွဈတညျကတညျးကအတိုငျး တညျရှိနတေယျလို့ယူဆရတဲ့ ကွာသပတေးဂွိုလျရဲ့ ပတျလမျးတှထေဲက ထူးဆနျးတဲ့ ဥက်ကာခဲတှကေိုလညျး လလေ့ာမှာဖွဈပါတယျ။
အောကျတိုဘာလထဲမှာပဲ မနှဈက လဆီကနေ ကမ်ဘာပျေါကို ပွနျယူလာတဲ့ ကြောကျခဲတှကေတဆငျ့ လကမ်ဘာရဲ့ မီးတောငျအခွအေနတှေကေို အတှငျးကကြ သိရှိလာရတယျလို တရုတျပညာရှငျတှကေ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီနမူနာတှကေို ခှဲခွမျးလလေ့ာမှုကနေ လကမ်ဘာရဲ့ ဓါတုဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ အပူရဲ့ သကျရောကျပွောငျးလညျးပုံ အခကျြအလကျသဈတှကေိုလညျး တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
နိုဝငျဘာလထဲမှာတော့ ဥက်ကာပြံတခုကို ဝငျတိုကျဖို့ နာဆာက ဂွိုလျတုတလုံးလှတျတငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာမွကေိုခွိမျးခွောကျလာတဲ့ ဒီဥက်ကာပြံတှကေို အရှိနျနဲ့ဝငျတိုကျခွငျးအားဖွငျ့ လမျးကွောငျးလှဲနိုငျမလားဆိုပွီး စမျးသပျတာလညျးဖွဈပါတယျ။
DART လို့အတိုခေါကျနာမညျပေးထားတဲ့ ဂွိုလျလမျးကွောငျးပွောငျးလဲရေးစမျးသပျမယျ့ ဂွိုလျတုကို SpaceX Falcon9ဒုံးပြံရဲ့ ထိပျဖူးကနတေဆငျ့ သယျဆောငျသှားမှာဖွဈပွီး ဒျေါလာသနျး ၃၃၀ ကုနျကတြဲ့ ဒီစီမံကိနျးဟာ နာမညျကွီး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ Bruce Willis ရဲ့ "Armageddon." ရုပျရှငျကိုလညျး ပွနျမွငျယောငျစပေါတယျ။
ကွယျတှပေေါကျကှဲတဲ့ ဖွဈစဉျအသေးစိတျနဲ့အာကာသ တှငျးနကျတှကေို မွငျရမယျ့ နာဆာရဲ့ X-ray မှနျပွောငျးကိုတော့ အခု ဒီဇငျဘာထဲမှာ လှတျတငျခဲ့ပွီး ရှာဖှတှေရှေိ့မှု အသဈတှကေနေ စင်ျကွာဝဠာကွီးအကွောငျးကို ပွောပွဦးမှာပါ။ Cambridge တက်ကသိုလျရဲ့ နက်ခတ်တဗဒေ အငျစတီကြုက ပါမောက်ခ Andrew Fabian ကတော့ အခုလိုပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့ဘယျကနေ ရောကျရှိလာသလဲဆိုတာနဲ့ စင်ျကွာဝဠာကွီးအကွောငျး ကနြျောတို့တကယျပဲ စူးစမျးလလေ့ာနကွေပါတယျ။ ဒါတှကေ သကျရှိတှအေတှကျတငျပဲ မဟုတျပါဘူး။ ကွယျတှဘေယျကလာသလဲ၊ ကွယျစငျစုတှကေရော၊ စသဖွငျ့ အရာအားလုံးကို လလေ့ာနတောပါ။”
သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော Hubble မှနျပွောငျးကွီးရဲ့နရောမှာ အစားဆကျခံဖို့အတှကျ အခု ဒီဇငျဘာလနှောငျးပိုငျးမှာ James Webb လို့ချေါတဲ့ အာကာသ မှနျပွောငျးကို လှတျတငျမယျလို့မှနျးထားပါတယျ။ မှနျပွောငျးကွီးကတော့ ဥရောပ ဂွိုလျတုတှလှေတျတငျနကြေ ပွငျသဈပိုငျ Guiana ရဲ့ Kourou ကို အောကျတိုဘာလထဲက ရောကျရှိနခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီမြိုးဆကျသဈအကာသလလေ့ာမှုဟာ ဘယျအကာသယာဉျတှထေကျမဆို အကာသကို ပိုပွီးနကျနကျရှိုငျးရှိုငျးစောငျ့ကွညျ့နိုငျဖို့နဲ့ အရငျကာလအခွအေနကေို ပိုပွီး စူးစမျးနိုငျဖို့ ပွငျဆငျရညျမှနျးထားပါတယျ။